Kuthetha ukuthini ukuphupha ngomona? Fumanisa i-Intanethi ▷ ➡️ kwi-Intanethi
1 Ukuphupha ngomona
2 Kuthetha ukuthini ukuphupha ngomona?
3 Ndiziva ndinomona ngencoko
4 Umona womfazi
5 Ndiziva ndinomona nge hug
6 Umona wendoda
7 Umona uphupha ngomntu omaziyo
8 Ukubamonela umntu ongamaziyo
9 Umona womntwana
10 Ukuqinisekisa ukungcatshwa
11 Ngaba olu hlobo lwamaphupha lulilizwi elilungileyo?
Xa umntu ethanda omnye umntu, kuyinto eqhelekileyo ukuba bamkhathalele kwaye nangakumbi kuqhelekile ukuba babe "nomona" othile. Ngamanye amaxesha ukuphupha ngomona kubonisa nje ukungakhuli okukhoyo, kodwa akukho mntu unje kwaye uninzi lwabantu luthatha kwelinye icala, ke oko kunokubangela ukuphela kobudlelwane koku.
Ukuba uphuphe ngale nto kubalulekile ukuba ungalahli themba kwaye ngaphezu kwako konke ungamrhaneli omnye umntu. Ukuba unokwenza oku, uyaqonda ukuba kulungile kuwe. Namhlanje uya kulazi ulwazi malunga naye kwaye uyazi ezona ntsingiselo ziqhelekileyo kuye.
Ukuphupha ngokuba nomona ngomntu luphawu olucacileyo lokuba kufuneka unakekele ngakumbi umntu osecaleni kwakho. Ayibonisi ukuba uyangcatshwa okanye ukuba omnye umntu uthetha nomnye umntu. Yinto embi nje omen indlela ophatha ngayo ubomi bakho nokuthandana kwakho ngokunjalo.
Ukukwazi kwabo ukuthintelwa yimicimbi ethile enxulumene nokungaqiniseki komnye. Eyona ngxaki yakhe inkulu yile yokuba akazithembi kwaye ngenxa yoko unomona. Namhlanje uya kuyazi intsingiselo yabo baphupha ngekhwele kwaye banokuziqhelanisa nemvakalelo yabo kuwe.
Ndiziva ndinomona ngencoko
Ukuba ukhe wanolu hlobo lwamaphupha kubalulekile ukuba uqale ngokuzola kwaye ungalahli themba. Omnye umntu akanabani kwaye uphupha ngengxoxo enomona sisilumkiso kuwe sokuba uzixabise ngakumbi. Zama ukwenza iqabane lakho loyike kancinci ukuphulukana nabanye abantu.
Le yimeko eqhelekileyo kwaye ichaphazela abantu abaliqela ngaxeshanye. Ukuba uphuphe ukuba nomona ngowasetyhini, luphawu lokuba kuya kufuneka unakekele ngakumbi icandelo lakho lomzimba. Yenza umthambo, ukunciphisa umzimba kwaye ngaphezu kwako konke uthenge iimpahla ezintsha ukuze uzenze ube nomtsalane ngakumbi.
Ndiziva ndinomona nge hug
Ixesha elingaphezulu liqhelekile ukuba ubudlelwane buphelelwe luthando kwaye kuya kufuneka unike ingqalelo ngakumbi koku. Kuyacetyiswa ukuba uphathe omnye umntu ngothando olungakumbi kunangaphambili. Zama ukucinga ukuba nitshatile kwaye lonke ukhathalelo, uthando kunye nemiboniso yeemvakalelo zihlala zivumelekile.
Uvumela ukungazithembi kukubambe kwaye kwixesha eliphakathi unokuba ngumntu osweleyo. Zama ukuzithemba ngakumbi nokuqina, uya kubona ukuba unezibonelelo ezininzi kunokuba ubuswele. Kubalulekile ukuba usebenzele ukuzithemba kwakho kwaye uphephe ukubonisa ubuthathaka kwelinye iqela kangangoko kunokwenzeka.
Umona uphupha ngomntu omaziyo
Ukuba uphuphe eli phupha kubalulekile ukuba unike ingqalelo imeko yeqabane lakho kuwe. Uya kuludinga uncedo kwaye unokuba negalelo kwelinye icala ngokufikelela kwesi sigaba sibi ngokulula. Zama ukuthetha, gcina ucango luvulekile, kwaye ngaphezulu kwako konke ukunqande ukudala ithiyori malunga neli phupha.
Ukubamonela umntu ongamaziyo
Akukho xesha apho umntu eza kuvela kuwe kwaye akubonise ubuhlobo ongakhange udibane naye. Umona ephupheni unokuchazwa njengoloyiko lokuphulukana noko sele unakho kwaye umntu ongaziwayo ungumhlobo omtsha. Kufanelekile ukuba uhlala uzama ukwamkela konke oku.
Ngokwesiqhelo umntwana umele ubumsulwa kwaye ukuphupha ngomona luphawu lokuba uyoyika ukuphulukana nothando lwakho. Ingcebiso efanelekileyo kuwe iya kuba kukuthembela kwelinye iqela kwaye usebenze kuthando lwakho. Ngethuba elifutshane uya kuba neenzuzo ezininzi ngakumbi kunangaphambili.
Ukuphupha ngomona sele kuyinto embi kakhulu kwaye ukuba ukungcatshwa kuqinisekisiwe nokuba kubi. Olu hlobo lwamaphupha alulunganga kwaye lunokubonisa ukuba elinye iqela alisakuboni ngendlela efanayo. Ukoyisa eli nqanaba kuyakufuneka uthethe kwaye ube nobudlelwane ngokuthe ngqo, uhlala ukhokelwa kukuthenjwa nothando.
Ngaba olu hlobo lwamaphupha lulilizwi elilungileyo?
Nantoni na elunyukiswe kwangaphambili kufuneka ibonwe njengelizwi elilungileyo kwaye ukuphupha ngomona akufani. Unazo zonke izixhobo onazo ukuze ube nolwalamano olonwabileyo, oko kukuthi, uthando kunye nentlonipho. Luloyiko kuphela, ukungakhuseleki, kunye nokungabikho kothando lwakho ngokwakho kubangela uloyiko olungekhoyo ukuba lwenziwe.
Zama ukuhamba kunye, xabisa uthando lwakho kwaye ungondli indalo ngentloko yakho. Ukufumana uthando lokwenene kuyakhohlisa, ke ungavumeli ezi ngxaki zincinci zityhaleke.